खरीद र उत्पादनहरूको चयन | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: उत्पादन को खरीद र चयन
तस्विरमा कालो थोप्लो / बिरुवासँग किसिमको फल वा फल छ?
फोटोमा कालो थोप्लो / बीजको साथ कस्तो किसिमको फलफूल वा फलफूल? जोशिलो फल) ड्र्यागन आई (पिटाहाया, पिटाया, लुन याang, ड्र्यागन फल, पिटाया)। ड्र्यागनको आँखा यो फलको नामको रूसी संस्करण हो। अन्तर्राष्ट्रिय नाम फल ...
डोनट र थेलेलबीच के फरक छ?
एक डोनट र एक स्टीयरिंग व्हील बीच के फरक छ? म भिन्नता देख्दिन। ब्यागल एक बाक्लो नरम स्टीयरिंग व्हील हो। ब्यागल एक औंठी आकारको बेकरी हो जुन चौक्स पेस्ट्री (बेसी डोनट, तर अधिक सुक्खा) बाट पकाइएको हो। ...
केकडा लिपिको के हो?
केकडा काठले बनेको के हो? सेतो माछाबाट रyes थपिएको साथ। एउटा क्र्याबलाई पनि हानि भएको छैन। त्यहाँ निश्चित रूपमा कुनै पनि केकाहरू छैनन्। त्यहाँ धेरै रेसिपीहरू छन् - यो निर्माताको अन्तस्करणमा निर्भर गर्दछ। चामल, ...
कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ कि गुलाबी सामनमा क्याभरी छ भने, माछा खोल्न बिना?
माछा नछोडी गुलाबी सामनमा क्याभियार छ कि छैन भनेर कसरी पक्का गर्ने? म पनि बुझ्न सक्दिन किन त्यस्तो समस्याहरू, यदि यसलाई राम्रो, प्राकृतिक गुलाबी सामन क्याभीआर किन्न गाह्रो छैन। त्यहाँ त्यहाँ उही ...
कसैलाई स्ट्राबेरी जाम मकेभ किनेको छ, क्याम्याटिकल को रचनामा के हो?
के कसैले महेवको स्ट्रबेरी जाम किनेको छ जुन सम्भवतः रचनामा रसायन हो? माहेभमा सोडियम बेन्जोएट र पोटेशियम शर्बेट हुन्छन् - ती चीजहरू जुन मानव शरीरलाई धेरै हानिकारक हुन्छ। म तपाईंलाई या त यस्तो जाम र ... सिफारिस गर्दछु।
मलाई रसायन विज्ञानको लागि आवश्यक कुनै पनि किरण चिप्स को रचना लेख्नुहोस्!
मलाई कुनै पनि Lies चिप्सको रचना लेख्नुहोस् जुन मलाई रसायनशास्त्रको लागि आवश्यक छ! मैले मेगा बेकन स्वादको साथ लेजको प्याक लिएँ, त्यसैले: क्यालोरी सामग्री - प्रति १०० ग्राम prote१० केसीएल, प्रोटिनहरू - .510. g जी, कार्बोहाइड्रेट ...
कसरी नकली देखि वास्तविक रातो कायाहार भेद गर्ने?
कसरी नक्कलीबाट वास्तविक रातो क्याभियार छुट्याउने? केवल स्वादको लागि, तर सामान्यमा, उच्च-गुणस्तरको क्याभियार कि उनी आफैंले पाइन् र ताजा जसले स्टोरमा क्याभियार दिनेछ र कहाँ ...
क्यान्सरको क्यान्सर कोठालाई खरीद गर्ने?
कहाँ क्यास्पियन हेरिंग किन्ने? क्यास्पियन एनाड्रोमस हेरिंग (अलोसा केसलरी) वा केसलरको हेरिंग, कालो-ब्याक, हेरि family परिवारसँग सम्बन्धित छ, त्यस्ता प्रतिनिधिहरू मध्ये एक हो: अटलान्टिक हेरिंग, प्यासिफिक हेरिंग, सार्डिन र ...
मलाई बताउनुहोस् मस्को मा 1 किलोग्राम प्राकृतिक शह को बजार मा कति छ?
मलाई बताउनुहोस्, अहिले बजारमा मस्कोमा एक किलो प्राकृतिक मह कति छ? गिरावटमा जर्मनीमा मैले प्रति किलोग्राम ur यूरोमा किनें। Ru 1० रूबलबाट। एमडीए को प्रकार मा निर्भर गर्दछ। अब ...
किन दूध खानु हुँदैन?
किन दूध सबैमा अमिलो हुँदैन, यदि केवल सोडा थपियो भने। त्यहाँ दुधमा एन्टिबायोटिक हुन सक्छ, र यो राम्रो छ यदि केवल व्यक्तिहरूको उपचारको लागि, र त्यसपछि पशुचिकित्सा हुन सक्छ। तेसैले…
कस्तो प्रकारको माछा सस्ता र स्वादिष्ट छ?
कस्तो प्रकारको माछा सस्तो र स्वादिष्ट हुन्छ? कोड (नीलो सेतो पार्ने, उदाहरणका लागि) कच्चा बाट - पोलक, र धूम्रपान - हेरिring। धेरै स्वादिष्ट, हल्का तौल। ह्याडक, हामीसँग १ किलमा ११113 रूबल छ (in ...
कसरी एउटा वास्तविक खानी छुट्टाउने। पानी "Essenuki" नकलीबाट?
कसरी एउटा वास्तविक खानी छुट्टाउने। पानी "Essenuki" नकलीबाट? नक्कली गँड्यौलाहरूमा ढु pe्गा फ्लोट गर्दछ र ती सबै नम्बरहरू उदाहरणका लागि संकेत गरिनु पर्दछ: ,,4,6,17,१XNUMX, आदि। एसेन्स्टुकी जानुहोस् र सिधा पिउनुहोस् ...
औसत किलोग्राम ताजा वा प्रत्यक्ष ट्राउट कति हो?
एक किलोग्राम ताजा वा प्रत्यक्ष ट्राउट औसतमा कति खर्च हुन्छ? को बारे मा 500r। हिजो मैले ओके, पीटर्सबर्गमा करेलियन ट्राउट किनें। सम्पूर्ण माछा १ किलोग्राम - करीव १ 1०-१160० रूबल / किलोग्राम (नाउ नपुग्ने) नर्वेली समुद्री ...
यो एक भोजन हो जसमा4पत्रहरू हो, के नाम हो?
यो--अक्षरको खाना हो, नाम के हो? गलत!!! बियर म भन्न सक्छु कि यो सिमीहरू COFFEE हुन्…। केवल एक चीज ... यो खाना छैन .... पोर्रिज। बायोस्फीयर शाकाहारी एक ब्लक को हुन्छ ...
नमस्ते .. प्रिय कुकुर। मलाई भन्नुहोस् .. मिनी शर्कुको प्रमाणिकता कसरी निर्धारण गर्ने?
नमस्कार .. प्रिय शेफ मलाई भन ... उखु चिनीको प्रामाणिकता कसरी निर्धारण गर्ने? संक्षेप मा, खैरो चिनी उखु उखु को रस वाष्पीकरण र एक विशेष तरिका मा गाढा, चिनी क्रिस्टल कभर छ। गाढा रंग ...
किण्वन उत्पादनहरू - कुन?
किण्वन उत्पादनहरू - कुन? आवश्यक छैन किण्वन। पेटबाट उत्पादित असीमितताका कारण आंताहरूमा किण्वित भएको जस्तो महसुस हुन सक्छ, जस्तै कडा कफी पिए पछि: क्याफिन र क्याटेचल्स, जुन ...
क्यूबेजले अब कति खर्च गर्छ?
एक बन्दकोठी स्विंग अब कति खर्च हुन्छ? गोभी तौल द्वारा बेचिन्छ। हामीसँग मस्को क्षेत्रमा -5 रूबल प्रति १ किलोग्राम सेसपूलको तौलको आधारमा जताततै छ) केजीको लागि भने रूबल ...
डिब्बाबंद खाना, अचारमा बोटुलमवादको लक्षणहरू के हो, यसले यसले कसरी कसरी हेर्छ?
क्यान्ड खाना, अचारमा बोटुलिज्मका लक्षणहरू के हुन्, यसले कसरी प्रकट गर्दछ? .. कुनै पनि हिसाबले! र स्वादको लागि, डाक्टरहरू भन्छन्, कुनै पनि हिसाबले ... .botulism एक अम्लीय वातावरणमा विकसित हुँदैन जब विषाक्त हुँदा - तत्काल ...
प्राकृतिक मक्खनमा कत्तिको प्रतिशत को हुनुपर्छ?
प्राकृतिक बटरमा कुन प्रतिशत फ्याट हुनुपर्दछ? उच्च-गुणस्तरको बटर क्रीमबाट विशेष रूपमा प्राप्त गरिएको उत्पादन हो र कम्तिमा .3791२..82,5% को फ्याट सामग्रीको साथ GOST 78 XNUMX XNUMX १ को आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। एमेच्योर तेलमा% XNUMX% ...
कुन खानाहरू पुरुष हार्मोन छन्?
कुन खानामा पुरुष हार्मोनहरू हुन्छन्? दुबैको मासु, अण्डा पूर्ण उत्पाद प्रोटीन भएको उत्पादनहरू हुन्, जसले हर्मोनल स्थितिमा ठूलो भूमिका खेल्दछन्। माहुरीपालन उत्पाद परागकण र माहुरीको रोटी प्रोस्टेटाइटिस बिरूद्ध प्रभावकारी हुन्छ ...
98 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,510 प्रश्नहरू।